Samsung Galaxy Note9က တကယ်ကို #ThePhoneWeNeed ဖြစ်လာပြီလား?
10 Aug 2018 . 4:33 PM
Samsung ရဲ့ Galaxy Note Series စမတ်ဖုန်းတွေက S Pen ဆိုတဲ့ Stylus ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်ပြီး Note ဆိုတဲ့အတိုင်း ထွက်ရှိလာတဲ့အချိန်တိုင်း ကြီးမားတဲ့ Display ပါဝင်လာတဲ့ဖုန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့လည်း Samsung ကနေ Galaxy Note9စမတ်ဖုန်းကို မနေ့ညက မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး လက်ရှိအကောင်းဆုံး Flagship စမတ်ဖုန်းတစ်ခုကို လိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တေ်ာတို့ Akhayar-Tech အနေနဲ့လည်း Samsung Myanmar ရဲ့ ဖိတ်ကြားချက်အရ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Galaxy Unpacked Event ကို Livestream ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး Galaxy Note9ကိုပါ စမ်းသပ်သုံးစွဲခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် အခု Article မှာတော့ Samsung က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Galaxy Note9စမတ်ဖုန်းက တကယ်ကို ကျွန်တော်တို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဖုန်းတစ်ခု #ThePhoneWeNeed ဖြစ်လာမလားဆိုတာကို ပြောသွားမှာပါ။
Samsung Galaxy Note9ဖုန်းက Display ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ Galaxy Note 8 စမတ်ဖုန်းထက် 0.1″ ပိုပြီး ကြီးမားတဲ့ 6.4″ Display ဖြစ်ပြီး Resolution အနေနဲ့တော့ 1440×2960 Pixel QuadHD+ Super AMOLED Display ကို သုံးစွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy Note9ရဲ့ ဒီဇိုင်းအရတော့ Galaxy Note 8 ကနေ သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခြင်းမရှိဘဲ ဖုန်းရဲ့ နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ Camera နဲ့ Fingerprint Sensor နေရာကိုပဲ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲခဲ့ပုံပါပဲ။ Camera ပိုင်းမှာတော့ Samsung Galaxy S9+ ရဲ့ Dual Aperture f1.5/f2.4 အသုံးပြုထားတဲ့ 12MP Camera နဲ့အတူ Secondary 12MP f2.4 Telephoto Camera ကိုပါ တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Samsung ရဲ့ အဆိုအရတော့ AI နည်းပညာတွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားပြီး ကိုယ်ရိုက်ကူးတဲ့ Scenes တွေကို အလိုအလျောက်သိရှိနိုင်တဲ့ Intelligent Camera နည်းပညာအသစ်လည်း ပါဝင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ Selfie Camera အနေနဲ့ကတော့ တူညီတဲ့ 8MP f1.7 Camera ကိုပဲထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Processor ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ Qualcomm Snapdragon 845 သို့မဟုတ် Exynos 9810 Processor ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ RAM 6GB နဲ့ 8GB ဆိုပြီး ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Storage ကိုလည်း 128GB နဲ့ 512GB အပြင် MicroSD Card ပါထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်ဦးမှာပါ။
Galaxy Note9မှာ သိသာတဲ့ပြောင်းလဲမှု ၂ ခုရှိနေခဲ့ပြီး အဲ့ဒါကတော့ S Pen နဲ့ Battery ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ S Pen ကို Bluetooth ထည့်သွင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ Camera အတွက် Remote Shutter ၊ YouTube Play/Pause နဲ့ Presentation တွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုအသုံးပြုဖို့အတွက် S Pen က အကွာအဝေး ၁၀ မီတာအတွင်းထိန်းချူပ်နိုင်ပြီး မိနစ် ၃၀ စာ Battery ဒါမှမဟုတ် Click အချက်ပေါင်း ၂၀၀ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ S Pen ကို အားပြန်သွင်းဖို့အတွက်ကတော့ ဖုန်းအတွင်းကို စက္ကန့် ၄၀ ထည့်သွင်းထားလိုက်ရင် ရပါပြီ။
Samsung က ယခု S Pen ကနေ ထိန်းချူပ်နိုင်မယ့် Software SDK ကိုလည်း Developer တွေကို ထုတ်ပေးသွားဦးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုကတော့ Battery ပါ။ Samsung Galaxy Note9စမတ်ဖုန်းက ကြီးမားတဲ့ 4000mAh Battery ပါဝင်တဲ့ စမတ်ဖုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေကုန်အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ 15W Fast Wireless Charging ကို အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့်လည်း ကြိုးနဲ့ အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ Quick Charge 2.0 နဲ့ပဲ အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Samsung Galaxy Note9စမတ်ဖုန်းကို ယခု သြဂုတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ကနေ သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့အတွင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ အနီးစပ်ဆုံး Samsung Brand Shop များနှင့် လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ကြီးများတွင် စရန်ငွေ ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ပေးသွင်း၍ ကြိုတင်မှာယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်မှာယူသူများအတွက် အထူးအခွင့်အရေးအနေဖြင့် Galaxy Note9(128 GB Version) ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ၇ သောင်းကျပ် တန်ဖိုးရှိ Samsung Original Wireless Charger Stand ကိုလည်းကောင်း၊ Galaxy Note9(512 GB Version) ဝယ်ယူသူတိုင်းအတွက် ကျပ် ၁သိန်း၁သောင်းခန့် တန်ဖိုးရှိ Samsung Original Wireless Charger Duo (ဖုန်းနှစ်လုံးအား တစ်ပြိုင်နက်အားသွင်းနိုင်သည်။) ကိုလည်းကောင်း ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ RAM 6GB ၊ Storage 128GB Version ကို ငွေကျပ် ၁,၃၉၉,၀၀၀ ကျပ် နဲ့ RAM 8GB ၊ 512GB Version ကို ငွေကျပ် ၁,၇၅၀,၀၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung Myanmar မှ ကြိုတင်မှာယူသူ Samsung ချစ်သူများအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သည့် အထူးအစီအစဉ်အနေဖြင့် Galaxy Note9ကြိုတင်မှာယူအားပေးသူများအတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းအပြင် ထပ်မံကံစမ်းနိုင်သည့် ဆုကြီးများစွာ ပါဝင်သော အထူး ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အား ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ထပ်မံကံထူးနိုင်သည့် ဆုလက်ဆောင်ပစ္စည်းများမှာ Grand Prize အဖြစ် Star City Thanlyin မှ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းပါဝင်သော Apartment တစ်ခန်း၊ First Prize အဖြစ် 2017 မော်ဒယ် Mitsubishi Mirage ကားသစ်တစ်စီး၊ ဒုတိယဆုအဖြစ် Samsung 48” TV အလုံး ၃၀ နှင့် တတိယဆုအနေဖြင့် ရေစိုခံ Clip2Speaker အလုံး ၄၀၀ အစရှိသည့် ဆုမဲပေါင်း ၄၃၂ ဆုပါဝင်မှာပါ။
Samsung ရဲ့ Galaxy Note Series စမတျဖုနျးတှကေ S Pen ဆိုတဲ့ Stylus ပါဝငျတဲ့ စမတျဖုနျးတှဖွေဈပွီး Note ဆိုတဲ့အတိုငျး ထှကျရှိလာတဲ့အခြိနျတိုငျး ကွီးမားတဲ့ Display ပါဝငျလာတဲ့ဖုနျးတှဖွေဈပါတယျ။ အခုနောကျဆုံးအနနေဲ့လညျး Samsung ကနေ Galaxy Note9စမတျဖုနျးကို မနညေ့က မိတျဆကျလိုကျပွီဖွဈပွီး လကျရှိအကောငျးဆုံး Flagship စမတျဖုနျးတဈခုကို လိုခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ ရှေးခယျြစရာတဈခုဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ Akhayar-Tech အနနေဲ့လညျး Samsung Myanmar ရဲ့ ဖိတျကွားခကျြအရ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးမှာ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ Galaxy Unpacked Event ကို Livestream ကွညျ့ရှုခဲ့ပွီး Galaxy Note9ကိုပါ စမျးသပျသုံးစှဲခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ အခု Article မှာတော့ Samsung က ထုတျလုပျလိုကျတဲ့ Galaxy Note9စမတျဖုနျးက တကယျကို ကြှနျတျောတို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ဖုနျးတဈခု #ThePhoneWeNeed ဖွဈလာမလားဆိုတာကို ပွောသှားမှာပါ။
Samsung Galaxy Note9ဖုနျးက Display ပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ Galaxy Note 8 စမတျဖုနျးထကျ 0.1″ ပိုပွီး ကွီးမားတဲ့ 6.4″ Display ဖွဈပွီး Resolution အနနေဲ့တော့ 1440×2960 Pixel QuadHD+ Super AMOLED Display ကို သုံးစှဲထားတာဖွဈပါတယျ။
Galaxy Note9ရဲ့ ဒီဇိုငျးအရတော့ Galaxy Note 8 ကနေ သိသိသာသာပွောငျးလဲသှားခွငျးမရှိဘဲ ဖုနျးရဲ့ နောကျဖကျမှာရှိတဲ့ Camera နဲ့ Fingerprint Sensor နရောကိုပဲ အနညျးငယျပွောငျးလဲခဲ့ပုံပါပဲ။ Camera ပိုငျးမှာတော့ Samsung Galaxy S9+ ရဲ့ Dual Aperture f1.5/f2.4 အသုံးပွုထားတဲ့ 12MP Camera နဲ့အတူ Secondary 12MP f2.4 Telephoto Camera ကိုပါ တပျဆငျထားတာဖွဈပါတယျ။ Samsung ရဲ့ အဆိုအရတော့ AI နညျးပညာတှကေိုပါ ထညျ့သှငျးထားပွီး ကိုယျရိုကျကူးတဲ့ Scenes တှကေို အလိုအလြောကျသိရှိနိုငျတဲ့ Intelligent Camera နညျးပညာအသဈလညျး ပါဝငျမယျလို့ သိရပါတယျ။ Selfie Camera အနနေဲ့ကတော့ တူညီတဲ့ 8MP f1.7 Camera ကိုပဲထညျ့သှငျးထားတာဖွဈပါတယျ။
Processor ပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ Qualcomm Snapdragon 845 သို့မဟုတျ Exynos 9810 Processor ကို အသုံးပွုထားပွီးတော့ RAM 6GB နဲ့ 8GB ဆိုပွီး ထှကျရှိလာမှာဖွဈပါတယျ။ Storage ကိုလညျး 128GB နဲ့ 512GB အပွငျ MicroSD Card ပါထပျမံတိုးခြဲ့နိုငျဦးမှာပါ။
Galaxy Note9မှာ သိသာတဲ့ပွောငျးလဲမှု ၂ ခုရှိနခေဲ့ပွီး အဲ့ဒါကတော့ S Pen နဲ့ Battery ပိုငျးပဲဖွဈပါတယျ။ ပထမဆုံးအနနေဲ့ S Pen ကို Bluetooth ထညျ့သှငျးပေးခဲ့ပွီးတော့ Camera အတှကျ Remote Shutter ၊ YouTube Play/Pause နဲ့ Presentation တှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အခုလိုအသုံးပွုဖို့အတှကျ S Pen က အကှာအဝေး ၁၀ မီတာအတှငျးထိနျးခြူပျနိုငျပွီး မိနဈ ၃၀ စာ Battery ဒါမှမဟုတျ Click အခကျြပေါငျး ၂၀၀ အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ S Pen ကို အားပွနျသှငျးဖို့အတှကျကတော့ ဖုနျးအတှငျးကို စက်ကနျ့ ၄၀ ထညျ့သှငျးထားလိုကျရငျ ရပါပွီ။
Samsung က ယခု S Pen ကနေ ထိနျးခြူပျနိုငျမယျ့ Software SDK ကိုလညျး Developer တှကေို ထုတျပေးသှားဦးမယျလို့ သိရပါတယျ။
နောကျထပျပွောငျးလဲမှုကတော့ Battery ပါ။ Samsung Galaxy Note9စမတျဖုနျးက ကွီးမားတဲ့ 4000mAh Battery ပါဝငျတဲ့ စမတျဖုနျးတဈခုလညျးဖွဈပွီးတော့ တဈနကေုနျအသုံးပွုနိုငျမယျလို့ သိရပါတယျ။ 15W Fast Wireless Charging ကို အသုံးပွုနိုငျပမေယျ့လညျး ကွိုးနဲ့ အားသှငျးတဲ့အခြိနျမှာတော့ Quick Charge 2.0 နဲ့ပဲ အားသှငျးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အခု Samsung Galaxy Note9စမတျဖုနျးကို ယခု သွဂုတျလ ၁၀ ရကျနကေ့နေ သွဂုတျလ ၂၂ ရကျနအေ့တှငျးမှာ မွနျမာနိုငျငံတဈဝနျးရှိ အနီးစပျဆုံး Samsung Brand Shop မြားနှငျ့ လကျလီအရောငျးကိုယျစားလှယျဆိုငျကွီးမြားတှငျ စရနျငှေ ၅၀,၀၀၀ ကပျြပေးသှငျး၍ ကွိုတငျမှာယူနိုငျမညျဖွဈပါတယျ။ ကွိုတငျမှာယူသူမြားအတှကျ အထူးအခှငျ့အရေးအနဖွေငျ့ Galaxy Note9(128 GB Version) ဝယျယူသူတိုငျးအတှကျ ၇ သောငျးကပျြ တနျဖိုးရှိ Samsung Original Wireless Charger Stand ကိုလညျးကောငျး၊ Galaxy Note9(512 GB Version) ဝယျယူသူတိုငျးအတှကျ ကပျြ ၁သိနျး၁သောငျးခနျ့ တနျဖိုးရှိ Samsung Original Wireless Charger Duo (ဖုနျးနှဈလုံးအား တဈပွိုငျနကျအားသှငျးနိုငျသညျ။) ကိုလညျးကောငျး ရရှိမညျဖွဈပါတယျ။
ဈေးနှုနျးအနနေဲ့ကတော့ RAM 6GB ၊ Storage 128GB Version ကို ငှကေပျြ ၁,၃၉၉,၀၀၀ ကပျြ နဲ့ RAM 8GB ၊ 512GB Version ကို ငှကေပျြ ၁,၇၅၀,၀၀၀ ကပျြနဲ့ ရောငျးခသြှားမှာဖွဈပါတယျ။
Samsung Myanmar မှ ကွိုတငျမှာယူသူ Samsung ခဈြသူမြားအား ကြေးဇူးတုံ့ပွနျသညျ့ အထူးအစီအစဉျအနဖွေငျ့ Galaxy Note9ကွိုတငျမှာယူအားပေးသူမြားအတှကျ လကျဆောငျပစ်စညျးအပွငျ ထပျမံကံစမျးနိုငျသညျ့ ဆုကွီးမြားစှာ ပါဝငျသော အထူး ကံစမျးမဲအစီအစဉျအား ထညျ့သှငျးထားပါတယျ။ ထပျမံကံထူးနိုငျသညျ့ ဆုလကျဆောငျပစ်စညျးမြားမှာ Grand Prize အဖွဈ Star City Thanlyin မှ အိပျခနျးနှဈခနျးပါဝငျသော Apartment တဈခနျး၊ First Prize အဖွဈ 2017 မျောဒယျ Mitsubishi Mirage ကားသဈတဈစီး၊ ဒုတိယဆုအဖွဈ Samsung 48” TV အလုံး ၃၀ နှငျ့ တတိယဆုအနဖွေငျ့ ရစေိုခံ Clip2Speaker အလုံး ၄၀၀ အစရှိသညျ့ ဆုမဲပေါငျး ၄၃၂ ဆုပါဝငျမှာပါ။